माघमा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल टुर्नामेन्ट हुने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
माघमा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल टुर्नामेन्ट हुने
काठमाडौं। आगामी माघ ७ गतेदेखि १९ गतेसम्म काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल टुर्नामेन्ट हुने भएको छ । मदन भण्डारी स्कोर्टस एकेडेमीको आयोजनामा हुने टुर्नामेन्टमा ४ विदेशी टिमसहित नेपालको राष्ट्रिय टिमलाई नेपाल रातो र नेपाल नीलो गरी दुई टिममा विभाजन गरी कूल ६ टिम सहभागी हुनेछन् ।
एकेडेमीले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यो प्रतियोगिता फिफाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता हुने जानकारी दिइयो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि एकेडेमीले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)मार्फत एएफसी र फिफामा पत्राचार गरिने जनाएको छ । ६ टिमलाई २ समूहमा विभाजन गरी सुरुमा लिग खेल हुनेछ । दुवै समूहबाट उत्कृष्ट २ टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन् । सेमिफाइनल र फाइनल भने नकआउट हुनेछन् ।
प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई २५ हजार अमेरिकी डलर र द्वितीय हुने टिमलाई १० हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । यसबाहेक उत्कृष्ट गोलकिपर, डिफेण्डर, मिडफिल्डर, फरवार्ड र कोचलाई जनही १ हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि दक्षिण कोरिया, भारत, बंगलादेश, भुटान, थाइल्याण्ड चीनका फुटबल बोर्डहरुलाई पत्राचार गरिरहेको र यसको समन्वय एन्फाले गरिरहेको एकेडेमीले जानकारी दिएको छ ।